ဝါဒဖြန့် Vs နွဲ့ - ထိုကွာခြားချက်ကဘာလဲ
လူအများစုဝါဒဖြန့်စဉ်းစားတဲ့အခါ, သူတို့စစ်အတွင်းစဉ်အတွင်းအစိုးရ၏အကူအညီဖြင့်သို့မဟုတ်တွေနဲ့ဖန်တီးပိုစတာနှင့်သီချင်းတွေကိုစဉ်းစားလေ့ဖြစ်သော်လည်း, ဒီကိစ္စကို၏အမှန်တရားဝါဒဖြန့်တာပိုမိုကျယ်ပြန်လျှောက်လွှာရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလူတွေအခြို့သောယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်သဘောထားများချမှတ်ရမယ့်အစိုးရအားထုတ်မှုမှသာရည်ညွှန်းပေမယ့်ကော်ပိုရေးရှင်းသငျသညျအမှုအရာကိုဝယ်ရရန်ကြိုးစားရာအတွက်နည်းလမ်းများကိုလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဝါဒဖြန့်ဆိုတာဘာလဲ? အမြင်ကျယ်စကားပြောကြှနျုပျတို့သညျ "ဝါဒဖြန့်" အဖြစ်စိတ်ကူးတစ်ခု၏အမှန်တရား, ထုတ်ကုန်၏တန်ဖိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသဘောထားက၏ညျသငျ့လျြောအကြောင်းကိုလူတွေအမြောက်အများဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့မဆိုစနစ်တကျအားထုတ်မှုတံဆိပ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝါဒဖြန့်ရိုးရှင်းစွာအကြောင်းကြားရန်ရှာကြံထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏ပုံစံကိုမျှမက, အစားကြောင့် (ကတိကျသောအခြေအနေများမှအခြို့သောစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေမှရှာကြံသောကြောင့်,) directional (ကမကြာခဏကလူတချို့ဖက်ရှင်လုပျဆောငျဖို့ရှာကြံသောကြောင့်,) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရကလူစစ်ဟာသူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းယုံကြည်ရထားတဲ့စနစ်တကျနဲ့တမင်လမ်းအတွက်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသည့်အခါ, ထိုဝါဒဖြန့်ပါတယ်။ တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းကလူသင်တုန်းအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးအဟောင်းထက်ပိုကောင်းသည်ဟုမထင်ရထားတဲ့စနစ်တကျနဲ့တမင်လမ်းအတွက်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသည့်အခါ, ထိုဝါဒဖြန့်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလူရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဦးတည်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုချမှတ်ရထားတဲ့စနစ်တကျနဲ့တမင်လမ်းအတွက်မီဒီယာကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကနောက်ဆုံးတွင်ကြောင်းလည်းဝါဒဖြန့်ပါတယ်။
တဦးတည်းခြားနားချက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့်အငြင်းပွားမှုများအကြားကဘာလဲဆိုတာမေးပါလိမ့်မယ် - ပြီးနောက်အားလုံးတစ်ဦးအဆိုပြု၏အမှန်တရားတည်ထောင်ရန်နှင့်အရှင်အနည်းဆုံးလုံးလုံးလြားလြား, လူတွေကြောင့်အဆိုပြု၏အမှန်တရားကိုလက်ခံရန်ရရှိရန်ဒီဇိုင်းအငြင်းအခုံသည်မဟုတ်လော ဒီမှာအဓိကသော့ခြားနားချက်တစ်ခုအငြင်းအခုံတစ်ဦးအဆိုပြု၏အမှန်တရားတည်ထောင်ရန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်စဉ်ဝါဒဖြန့်မခွဲခြားဘဲသူ့ရဲ့အမှနျတရားနဲ့အမြဲတစ်ဦးတည်းတဖက်သတ်ထုံးစံ၌တစ်ဦးအယူအဆ၏မွေးစားပြန့်နှံ့ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ရိုးရှင်းစွာ "ဝါဒဖြန့်" အဖြစ်တစ်ခုခု labeling အလိုအလျောက်အမှန်တရား, တနျဖိုး, ဒါမှမဟုတ်လျက်ရှိသည်အရာကိုညျသငျ့လျြောအကြောင်းကိုမှာအားလုံးဘာမှမပြောပါဘူးသျောစိတျထဲထားပေးပါ "ရောင်းချခဲ့သည်။ " အထက်ပါဥပမာကိုသုံးပြီး, ဖြစ်ကောင်းကစစ်ကြောင်းမှန် အသစ်ကသင်တုန်းပိုကောင်းဖြစ်တယ်, လူတွေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့အပြုသဘောရှိသည်မဟုတ်သင့်ပါတယ်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမှားယွင်းသောသို့မဟုတ်အထင်မြင်မှားစေသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်ထားတဲ့ "ဝါဒဖြန့်" အကြောင်းကိုဘာမျှရှိပါသည်။ ကောင်းသောအဘို့ကိုအသုံးပြုထားကြောင်းဝါဒဖြန့် tools တွေ၏ဥပမာအရက်မူး-မောင်းနှင်မှု့တားရန်သို့မဟုတ်မဲပေးမှတ်ပုံတင်ရန်လူတွေကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အအကြီးစားအစီအစဉ်များဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ဝါဒဖြန့်မကောင်းတဲ့သောယေဘုယျအမြင်ရှိပါသလော ဝါဒဖြန့်မခွဲခြားဘဲသူ့ရဲ့အမှန်တရားတစ်ခုစိတ်ကူး၏မွေးစားပြန့်ပွားနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်သောကွောငျ့, လူတွေပိုပြီးသံသယပေါ်မှာကြည့်ဖို့များပါတယ်။ လူအများစုဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှာအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းသူတို့နေဆဲအမှန်တရားဂရုစိုက်နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ကြောင်းထင်ကြဘူး။ သူတို့တချို့အဖွဲ့အစည်းကအမှန်တရားနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအစီအစဉ်တွန်းအားပေးကြောင်းယုံကြည်ပါက, သူတို့တစ်တွေအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သွားပါတယ်။
ဒါဟာကျူးလွန်ရန်ဝါဒဖြန့်ဘို့ဒီတော့ဘုံဖြစ်ပါတယ် မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ် ပုံပျက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ, ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ကြောင်းလမ်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဝါဒဖြန့်စိတ်ကူးဖို့အလွန်ခက်ခဲကြောင်း, အခြားအမှားများအများကြီးနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အလွန်ဂရုတစိုက်သတင်းစကားအကြောင်းကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရန်ပျက်ကွက်သည့်အခါတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဝါဒဖြန့်လေ့ရှိအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာမှာငါတို့ရှိသမျှဤမျှလောက်များစွာသောမက်ဆေ့ခ်ျများကမည်သည့်လမ်းအတွက်ကအားလုံးကိုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ shortcuts တွေကိုယူသွေးဆောင်ကြောင်းဤမျှလောက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူတရစပ်နေကြသည်။ သို့သျောလညျးအရေးပါကျော်လွှားကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ shortcuts တွေကို ဆင်ခြင်ခြင်း အတိအကျ propagandistic မက်ဆေ့ခ်ျကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိမထားမိဘဲကျနော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့သဘောထားတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့သူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။
ဆက်သွယ်မှုအလိုအလျောက်သောကွောငျ့တိုင်, ငါတို့ဝါဒဖြန့်အဖြစ်တစ်ခုခု labeling ကြောင်းစိတ်ကူးမနိုင်ထိုကြောင့်ထိုကမ်းလှမ်းကောက်ချက်တွေအကြောင်းဘာမှကပြောပါတယ်။ ဟူသောဝေါဟာရကို "ဝါဒဖြန့်" တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းတင်တံဆိပ်သောကွောငျ့ထို့အပြင်, ဝါဒဖြန့်မရှိဝေဖန်မှုကြောင့်တံဆိပ်နှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီအစားသူကပထမဦးဆုံးတစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ ဝေဖန်မှု နှင့်အပြီးဖြစ်လျှင်, ငြင်းခုံ ချေပသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းနေကြတယ်, ဒါကြောင့်ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ပုံစံအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းထောက်ပြနေသည်။
Analog နှင့် Homologous structures များ defining
Grammar အတွက် Predicate
သဘောဆောင်သော Fission အဓိပ္ပာယ်
Ari မျှ mama က de - "ဒါဟာ Go ကြစို့" ၏ဂျပန်ဗားရှင်း
သင်၏အပင်း-Pong ရဲ့ Power Up ကိုစုပ်
စပိန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော် '' ကွန်း '' ၏အတော်များများကအသုံးပြုခြင်း
MONDEX: သားရဲ၏, Mark?
အဆိုပါ Tasmanian ကျားအကြောင်း 10 အချက်အလက်
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒါဝိဒ်သည် Dixon က Porter
ပြည်သူ့ Crusade ကို
သင်ကလမ်းညွှန်ဖို့တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် Visual ကုစားခြင်း
ပြင်သစ်မိုးလေဝသဝေါဟာရ - က Le Temp